> Resource > iPhone > Sida loo Print Notes ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Sidee baan ku daabacan qoraalo ka iPhone 4?
Waxaan ka dhigi dhacdo taariikh iyo isticmaali duurka ku qoraalada for my liiska LA SAMEEYO maalin kasta. Ma jiraan hab lagu daabaco qoraalada? Mahadsanidiin.
Arrintan oo uu weheliyo caanka ah ee telefoonada smart, dad badan waxay u muuqdaan in ay qortaan, xataa qorto waraaqaha muhiimka ah ku shubtaan taleefanadooda iyagoo, sida muuqata u fududeeyaan nolasha. Waxaad ku qori kartaa wakhti kasta iyo meel kasta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku faraxsantahay nuqulo adag, sidee ayaad u daabacdo? Dadka isticmaala iPhone, waxaa jira war wanaagsan, oo aad ka iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5 ama tusaalayaal kale oo ka daabacan kartaa xusuusqor si fudud on your computer, ilaa iyo inta aad qabto Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery ) (Windows) rakibay on your computer.
Wondershare Dr.Fone Waa barnaamij aad aaminsantahay oo user-friendly, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad si fudud aad ka iPhone geliyey qoraalada si aad u computer iyo kuwa daabac. Si ka duwan Lugood, waxaa kuu ogolaanaya in aad si toos ah u dhoofiyaan qoraalo ka iPhone sida file a arki elekterikal ah, si aad daabacan kartaa iyada oo aan wax ka beddelid kasta. Waxaa intaa dheer, waxaad u isticmaali kartaa inay soo saaro oo daabacan iPhone qoraalo ka gurmad Lugood, iyo sidoo kale farriimaha, xiriirada, iwm
Download version maxkamad free hoos ku qoran waa in hadda isku dayi bilaash ah!
Talaabooyinka sida loo daabaco iPhone uyiri kombiyuutarka
Next, aynu isku dayi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) si wadajir ah u daabaco qoraalo ka iPhone in tallaabooyinka.
Download iyo rakibi version Mac barnaamijka on your computer, ka dibna ay u maamulaan. Suuqa ayaa aasaasiga ah waxaa loo soo bandhigi doonaa sida soo socota. Dooro habka soo kabasho. Waxaa jira laba ka mid ah: soo kabsado Lugood ee kaabta File ceshan foomka macruufka Device. Dooro mid ka mid ah hore, kaliya straightly tagaan. Haddii aad doorato mid ka mid ah oo kale, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer ka, ka dibna sii.
Kabsado macruufka Qalabka:
Kabsado kaabta Lugood Files:
Tallaabada 2. Sawirka qoraalada iPhone aad
Qoraalada Print kaga imaanayo iPhone: Dooro faylka raad raac ah oo aad iPhone oo guji Start Scan Macdan ka kooban.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo ka soo kabsado qalabka macruufka. Haddii aad isticmaasho iPhone 5 / 4s, xiriiriyaan iPhone oo guji Start Scan si toos ah u iskaan.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco hage hoose si aad baarista iPhone:
Hay iPhone oo riix badhanka Start ee suuqa kala barnaamijka ee ku on your computer.
Riix badhanka Power iyo button Home waqti isku mid ah marka aad bilowdo tallaabada ugu horreysa
Fur button Power 10 ilbiriqsi ka dib, oo sii button Home riixriixan oo kale 15 ilbiriqsi ah, ilaa aad ka hesho hab iskaanka ah.
Marka aad hesho, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPhone xogta ku yaal.
Tallaabada 3. Print qoraalada iPhone aad
Dhamaadka sawiridda, waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran qoraalada mid mid in natiijada scan aad. Hubi oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer sida file HTML ah. Markaas waxaad ka daabacan kartaa qoraalada iPhone hadda.